9-ka Nooc ee Baraha Bulshada iyo sida mid walba uga faa'iidaysan karo ganacsigaaga | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/9-ka Nooc ee Baraha Bulshada iyo Sida Mid kastaaba uga Faa'iidaysan karo Ganacsigaaga
9-ka Nooc ee Baraha Bulshada iyo Sida Mid kastaaba uga Faa'iidaysan karo Ganacsigaaga
Markaad ka fekereyso inaad u abuurto istaraatiijiyad warbaahinta bulshada ganacsigaaga, dhowr goobood oo hormuud ah ayaa laga yaabaa inay isla markiiba maskaxda ku hayaan: Facebook, Instagram, Twitter, iyo waxaa laga yaabaa in YouTube ama Pinterest, iyadoo ku xidhan warshadahaaga.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah goobaha warbaahinta bulshada, oo leh goobo cusub iyo qaabab cusub oo soo baxaya si joogto ah. Qaarkood waa kuwo qurux badan, halka kuwa kalena ay awood u leeyihiin inay noqdaan Instagram-ka xiga ama TikTok.
Hal shay oo isbeddelay ilaa maalmihii hore ee warbaahinta bulshada ayaa ah in goobo badan oo loo isticmaalo in ay diiradda saaraan hal shaqo, sida shabakadaha bulshada ama wadaagista sawirka. Hadda, inta badan aaladaha warbaahinta bulshada ee la aasaasay ayaa balaariyay si ay ugu daraan baahinta tooska ah, xaqiiqada la kordhiyay, wax iibsiga, maqalka bulshada, iyo in ka badan.
Markaa, halkii aad ku siin lahayd sharraxaad heer sare ah oo ku saabsan Facebook, Twitter iyo LinkedIn (waxaad ka heli kartaa meel kasta!), Waxaan u ururinay noocyo kala duwan oo aalado ah sagaal qaybood oo guud kuwaas oo diiradda saaraya kiisaska isticmaalka gaarka ah iyo waxa ganacsiyadu ku fulin karaan iyaga oo isticmaalaya.
Bonus: Akhri tillaabo-tallaabo hagaha istiraatijiyadda warbaahinta bulshada oo leh tabo-yaqaanno sida loo kobciyo joogitaankaaga warbaahinta bulshada.
Sida loo doorto noocyada ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada ganacsigaaga
Iyada oo tirada weligood sii kordheysa ee aaladaha warbaahinta bulshada, waxay noqon kartaa wax aad u adag in si joogto ah la yaabto in mid kasta oo iyaga ka mid ah uu mudan yahay waqtigaaga.
Si aad uga fogaato inaad waqti badan ku qaadato barashada xadhkaha madal kasta oo cusub, u ogolow istaraatiijiyada suuqgeynta warbaahinta bulshada inay hagto go'aamadaada, oo kaliya ku biir shabakadaha taageera yoolalkaaga.
Raac saddexdan tabo si aad u dhisto shuruudo kuu gaar ah oo kaa caawin doona inaad qiimeyso goob kasta oo cusub oo warbaahinta bulshada ah, iyada oo aan loo eegin waxa ay tahay iyo sida ay u shaqeyso.
Maareeyayaasha warbaahinta bulshada ayaa u duulaya wicitaan gaaban si ay u maqlaan wax ku saabsan madal cusub oo ay tahay inaan ku jirno pic.twitter.com/sagFLxpuiM
- WorkInSocialTheySaid (@WorkInSociaI) Abriil 27, 2021
Su'aasha ugu horreysa ee ay tahay inaad weydiiso ka hor intaadan ku biirin bar-kulanka cusub ee warbaahinta bulshada waa: aaway dhagaystayaashaadii?
Macno badan ayay samaynaysaa in aad tagto halka ay dhegaystayaashu mar horeba ku sugan yihiin halkii aad ku biiri lahayd madal cusub oo aad ku soo jiidan lahayd dhagaystayaashaada.
Midda labaad in la fahmo waa sida dhagaystayaashaadu u isticmaalayaan madalkaas. Nooc noocee ah ayay raadinayaan? Noocyada xisaabaadka ay raacaan? Miyay yihiin macaamiil dadban mise abuurayaal nuxur leh?
Si aad u hesho aragtiyo faahfaahsan oo ku saabsan sida dadku u isticmaalaan aaladaha warbaahinta bulshada ee kala duwan, u gal warbixintayada Gobolka Digital 2021.
Source: Warbixinta Digital 2021
Lasoco xogta xogta baraha bulshada
Mar kasta oo ay soo baxdo madal bulsho oo cusub, waa lama huraan in la ogaado faraqa u dhexeeya shayga cusub ee dhaldhalaalaya iyo madal si degdeg ah u koraysa oo awood u leh inay ku dhegto.
In kasta oo qofna aanu u sheegi karin mustaqbalka, hal dariiqo oo lagu ogaan karo haddii madal ay leedahay awoodda joogitaanku waa in la barbar dhigo tirakoobkeeda aaladaha warbaahinta bulshada ee la aasaasay.
Haddii aadan hubin halka aad ka heli karto xisaabtii dhoweyd, waanu kaa daboolnay:
Ku toosnow yoolalkaaga ganacsi ee muhiimka ah
Naftaada weydii: waa kuwee aaladaha ku habboon yoolalka ganacsigeyga?
Tusaale ahaan, haddii mid ka mid ah yoolalkaagu ay tahay inaad kordhiso wacyiga ku saabsan badeecad ama adeeg cusub oo ka faa'iidaysan kara casharrada fiidyowga ah, waa inaad diirada saartaa aaladaha fiidiyowga-kaliya (sida YouTube iyo Vimeo) ama qaabab muuqaal ah oo laga heli karo bogagga aad hore u leedahay. firfircoon (sida Sheekooyinka Instagram iyo Reels, Facebook Live, iwm.).
Saadaasha warbaahinta bulshada:
2020-yada waxa arki doona qarax goobo cusub. Suurtagal maaha in calaamaduhu ay yeeshaan joogitaan firfircoon oo dhan, waxay si buuxda u go'aamin doonaan kaliya 2 ama 3. Xirfadaha suuq-geynta ee lagama maarmaanka ah waxay noqon doonaan isgaarsiin iyo hal-abuurnimo, maadaama aad baran karto goobo cusub oo aad ku socoto.
- Matthew Kobach (@mkobach) Febraayo 18, 2021
Noocyada baraha bulshada iyo qaababka ay tahay inaad ogaato 2021
1. Qalabka maqalka bulshada iyo qaababka
Tusaalayaal: Guriga naadiga, Goobaha Twitter-ka, Spotify
Waxaa loo isticmaalaa: Dhageysiga wada hadalka tooska ah ee mowduucyo gaar ah.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Goobaha cusub ee maqalka bulshada (sida Clubhouse) iyo qaabab (sida Goobaha Twitter-ka) ayaa kobcay intii lagu jiray xiritaannada COVID-19 iyadoo dadku ay guriga ku sugnaayeen waqti dheeri ah si ay ugu biiraan wada sheekaysiga tooska ah.
Faa'iidada ugu muhiimsan ee aaladaha warbaahinta bulshada ee maqalka ah iyo qaababka waa dareenka sare iyo ka-qaybgalka aad u badan tahay inaad ka hesho dhegaystayaasha door-biday.
Si toos ah, wada sheekeysiga ka qayb qaadashada ayaa kaa caawin kara inaad u dhisto sawirkaaga hogaamiye ahaan meesha aad ku jirto oo aad ganacsigaaga ama badeecadaada u soo bandhigto daawadayaasha qiimaha leh ee horayba u xiisaynaya mawduucyada la xidhiidha niche-kaaga (haddii kale, ma hagaagayaan).
Waa kuwan qaar ka mid ah fikradaha bilaabay isticmaalka aaladaha warbaahinta bulshada ee maqalka ah:
Qaybaha warshadaha ee martida loo yahay.
Baahiyo warar iyo ogeysiisyo waaweyn.
Marti geli kalfadhiyada is dhexgalka (sida AMAs) ee dhagaystayaashaada.
Diiwaangeli waraysiyada inta lagu jiro wada sheekeysiga tooska ah ee Clubhouse/Twitter Spaces oo u soo rar sidii muuqaal muuqaal ah (tusaale: Bandhigga Warbaahinta Bulshada Geekout).
Ku dhis hoggaanka fikirka ganacsigaaga bandhig 30-60 daqiiqo ah.
Matt Navarra wuxuu qabtaa shaqo aad u fiican oo isku darka Goobaha Twitter-ka iyo muuqaallada:
Waanu kaa daboolnay. Hubi: @SpaceCastsPod
Waxaan duubnaa oo soo rarnaa fadhiyada boosaska twitter-ka toddobaad kasta quudintan podcast-ka ah.
Daabacaadda maanta waxay soo bixi doontaa maalinta xigta ama wax ka badan
- Matt Navarra (@MattNavarra) Luulyo 16, 2021
2. Muuqaalada baraha bulshada iyo qaababka
Tusaalayaal: YouTube, TikTok, Sheekooyinka Instagram iyo Reels, Facebook Watch
Waxaa loo isticmaalaa: Daawashada muuqaalada qaabab gaaban iyo kuwo dheerba.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Fiidiyowyada baraha bulshada ayaa aad ugu fiican soo jiidashada dareenka, wadista wacyiga summada, iyo u keenista alaabada nolosha qaab aan wali sawiradu awoodin.
Fiidiyow kasta oo ka kooban oo aad daabacdo waa in loo qaabeeyey si loo maaweeliyo, wax u baro, iyo/ama loogu dhiirrigeliyo dhagaystayaashaada. Fiidyowyada loo sameeyay in la iibiyo kaliya maaha inay mashquuliyaan daawadayaasha.
Qaar ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee ganacsiyada isticmaalaya aaladaha warbaahinta bulshada ee fiidyowga ah waa:
Ryanair on TikTok - aad u madadaalo badan, tus faham wanaagsan oo ku saabsan kaftanka iyo nuucyada isticmaalayaasha TikTok.
Fikradda YouTube-ku waxay abuurtaa xog waxbarasho taas oo labadaba waxtar u leh oo dhiirigelinaysa isticmaallayaasheeda.
Goobaha quruxda badan ee Instagram Reels - waxay ku siisaa dhiirigelin safarka iyada oo loo marayo muuqaallo gaagaaban oo xirfad leh.
3. Qaababka nuxurka oo muuqda
Tusaalayaal: Snapchat, Sheekooyinka Instagram, Sheekooyinka Facebook, Sheekooyinka LinkedIn
Waxaa loo isticmaalaa: Dirista fariimaha lama filaanka ah si gaar ah iyo daabacaadda wakhtigeeda, nuxurka-daqiiqada ee dhammaan taageerayaashaadu si ay u daawadaan ilaa 24 saacadood.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Qaababka lama filaanka ah sida Sheekooyinka ayaa si fiican ugu habboon soo dhejinta macluumaadka wakhtiga ku habboon, sida ogeysiisyada, walxaha daabacaadda xaddidan, ama dhacdooyinka tooska ah.
Inta badan Sheekooyinka iyo waxa ku jira Snapchat ayaa sidoo kale dareema run badan oo ka turxaan yar sababtoo ah nolosha shelf ee 24-saac. Sidan oo kale, waxay u ogolaataa ganacsiyada inay muujiyaan dhinac bini'aadan oo dheeraad ah.
Waa kuwan fikrado ku saabsan sida ganacsigaagu uu u isticmaali karo waxyaabaha sii baxaya:
Cod-bixinta, cod bixinta (adoo isticmaalaya istiikarrada Sheekooyinka is-dhexgalka)
Teasers/hoos u dhigida soo saarista alaabta
Waxyaabaha ka dambeeya muuqaalka
Ogeysiisyada xasaasiga ah ee waqtiga
Tusaalaha ugu wanaagsan wuxuu ka yimid mid ka mid ah rootiyaasha maxalliga ah ee aan jeclahay, kuwaas oo ku dhejiya takhasuskooda toddobaadlaha ah Sheekooyinkooda Instagram.
4. Golayaasha wada xaajoodka
Tusaalayaal: Reddit, Quora
Waxaa loo isticmaalaa: Weydiinta iyo ka jawaabista su'aalaha, isku xidhka, samaynta bulshooyinka ku xeeran mawduucyo xiiso leh iyo kuwo ku salaysan.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Si dhab ah ugu caawi macaamiishaada adiga oo amaahinaya ganacsigaaga khibrada mawduucaaga oo ka jawaabaya su'aalaha la xidhiidha warshadahaaga. Dhibcaha gunnada haddii aad la wadaagi karto macluumaadka ku saabsan summadaada iyo alaabtaada jawaabahaaga, laakiin taasi maaha inay noqoto yoolkaaga koowaad ee ka qaybgalka golayaasha doodaha.
Hal shay oo mudan in la xuso: On Reddit, aad ayaa looga xumaaday in la geliyo wax is-daba-marin ah jawaabaha. Haddii aad wax u soo dhejinayso ganacsi ahaan, iska hubi inaad ka jawaabto su'aasha asalka ah oo kaliya ku dar xidhidhka alaabtaada haddii ay si dhab ah waxtar u leeyihiin. Kahor intaadan ku dhejin subreddit, hubi sharciyada si aad u xaqiijiso haddii lagu daro isku xirka ganacsigaaga la oggol yahay.
In kasta oo Microsoft aysan abuurin subreddit-ka / r/XboxOne, mar ay arkeen sida ay caanka u tahay, waxay bilaabeen inay la falgalaan Redditors iyagoo martigelinaya kalfadhiyada AMA ee horumarinta ciyaarta.
5. Goobaha warbaahinta bulshada laga iibsan karo iyo muuqaalada
Tusaalayaal: Biinanka Alaabta Pinterest, Dukaammada Facebook, Dukaamada Instgramka, TikTok, Shopify, Douyin, Taobao
Waxaa loo isticmaalaa: Cilmi-baarista iyo iibsashada alaabada laga soo bilaabo sumadaha si toos ah iyada oo loo marayo goobaha warbaahinta bulshada.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Ka faa'iidayso sifooyinka saaxiibtinimo ee mobilka ku dhex jira si aad ugu ogolaato dhagaystayaashaada inay kaa iibsadaan adiga oo aan ka tagin abka warbaahinta bulshada.
Astaamaha ay ka midka yihiin biinanka Alaabta Pinterest, Dukaamada Instagram, iyo wax iibsiga gudaha ee TikTok waxay kuu oggolaanayaan inaad si toos ah ugu xidhid buug-gacmeedkaaga astaanta astaantaada abka kasta.
Xitaa haddii taageerayaashaadu aysan jeclayn inay wax ku iibsadaan baraha bulshada ama ay haystaan ​​​​safar iibsadaha oo dheer, sifooyinka wax iibsiga waxay kuu oggolaanayaan inaad calaamadiso alaabta, ku darso macluumaad dheeraad ah oo badeecada ku wado oo u wado taraafikada boggaaga.
Qaar ka mid ah siyaabaha ugu wanagsan ee loo isticmaalo wax-ka-iibsiga baraha warbaahinta bulshada:
Daabacaad xaddidan ayaa hoos u dhacda, tusaale, ku dhawaaqida soo-saarka alaabada gaarka ah ee warbaahinta bulshada iyo ku xidhidhiyaha ama ku calaamadaynta alaabta iyada oo loo marayo buug-gacmeedka alaabtaada
E-ganacsiga (meelo badan oo warbaahinta bulshada ah ayaa leh is dhexgalka e-commerce, sida Shopify, oo aad si toos ah uga heli karto dashboardkaaga Hootsuite)
Dib-u-habaynta, tusaale ahaan, abuurista dhagaystayaal gaar ah oo ku salaysan cidda ku hawlan Facebook/Instagram Dukaamadaada
Waxaad sidoo kale martigelin kartaa munaasabadaha wax iibsiga ee tooska ah baraha bulshada. Wax iibsiga tooska ah wuxuu noqday suuq weyn oo Shiinaha ku yaal, isagoo dhiirigelinaya aaladaha sida Instagram inay soo bandhigaan Shopping Live.
6. Baraha bulshada oo si toos ah loo daawado
Tusaalayaal: Twitch, YouTube, Instagram Live Rooms, Facebook Live, TikTok
Waxaa loo isticmaalaa: U baahinta muuqaal toos ah daawadayaal badan. Fiidiyowyada tooska ah waxay u dhexayn karaan hal qof oo is tusaya iyo waxa ay ku sameynayaan shashadooda ilaa goleyaal si xirfadaysan loo habeeyey oo leh ku hadla badan.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Caannimada tooska ah ee tooska ah ayaa qaraxday intii lagu jiray aafada markii dadku ay ku xayiran yihiin guriga inta lagu jiro qufulka iyada oo aan waxba la qaban.
Si kastaba ha ahaatee, uma baahnid masiibo caalami ah si aad u hesho daawadayaasha si ay u daawadaan qulqulka tooska ah. Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo qulqul-mudnaan leh, laga bilaabo wareysiga martida caanka ah iyada oo la samaynayo wax soo saar gaar ah oo muujinaya martigelinta fadhiyada AMA maamulayaasha ganacsigaaga.
Livestreams waxa kale oo ay siisaa fursad ay isticmaalayaashu si toos ah ula falgalaan martida loo yahay, marka waa muhiim in lala socdo oo laga qayb galo faallooyinka inta lagu jiro qulqulka. Ka akhriso talooyin badan oo ku jira hagahayaga si toos ah warbaahinta bulshada.
Markii COVID-19 uu hakiyay tartamada Formula 1 inta lagu jiro 2020, dhowr darawal ayaa bilaabay inay naftooda ku soo qulqulaan iyagoo ku ciyaaraya jilayaasha wadista Twitch, kaasoo si weyn caan ugu noqday taageerayaasha.
7. Goobaha warbaahinta bulshada ee ganacsiga
Tusaalayaal: LinkedIn, Twitter
Waxaa loo isticmaalaa: Ku xidhida xirfadlayaasha warshadahaaga ama macaamiisha mustaqbalka.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Goobaha warbaahinta bulshada ee ganacsigu waxay bixiyaan adeegsiyaal badan oo suurtagal ah: shaqaaleysiinta iyo shaqaaleysiinta karti, dhisidda cilaaqaadyada B2B, iyo ku xidhida xirfadlayaasha goobtaada.
Platforms sida LinkedIn waxay ku fiican yihiin ujeedooyinka B2B, sababtoo ah waxay u oggolaanayaan summadaha inay ku xidhmaan dhegaystayaal cusub, iyaga oo la kulma halka ay ka galaan shabakadaha oo ay ganacsi sameeyaan.
Laakin LinkedIn ma aha goobta kaliya ee ganacsiga hore u marinaysa warbaahinta bulshada. Twitter-ku wuxuu ganacsiyada siiya fursad ay ku helaan wada-sheekeysi khuseeya, oo ay ugu daraan siyaabo macno leh. Tusaalaha ugu wanaagsan ee tan waa Adweek, kaas oo martigeliya wada sheekeysiga toddobaadlaha ah ee suuqgeynayaasha dhijitaalka ah ee loo yaqaan #AdweekChat.
Waxa kale oo jira bulshooyin lagu dhisay hashtagyada warshadaha gaarka ah ee Twitterka, sida #MarketingTwitter iyo #FreelanceTwitter.
tip Pro: Deji tiir kelmad-ku-saleysan adiga oo isticmaalaya hashtag-ga warshadaha ee Hootsuite si aad ula socoto wada-hadallada ku habboon si aad uga qaybgasho.
8. Baraha bulshada ee bulshada xiran/gaarka ah
Tusaalayaal: Hadalka, Slack, Kooxaha Facebook
Waxaa loo isticmaalaa: Abuuritaanka bulshooyin, iyada oo ay suurtagal tahay in ay u baahan yihiin diiwaangelin ama tallaabooyin kale oo lagu baaro xubnaha cusub.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Ganacsiyadu waxay isticmaali karaan kooxaha gaarka ah si ay isugu keenaan xubnaha bulshadooda si ay isugu xidhmaan caqabadaha la wadaago, ugana jawaabaan su'aalaha midba midka kale, oo ay dareemaan dareen lahaanshaha xirfadeed.
Maamule kooxeed ahaan, ganacsigaagu wuxuu xaq u leeyahay inuu dejiyo xeerar ku saabsan waxyaabaha ay ka mid yihiin is-xagaynta. Kooxo badan (gaar ahaan Facebook-ga) waxay u baahan yihiin xubnaha inay ka jawaabaan su'aalo dhowr ah ka hor inta aanad ku biirin si ay u baaraan spam-bixiyeyaasha, laakiin sidoo kale waxaad isticmaali kartaa meelahan si aad u weydiiso xubnaha inay galaan liiska suuq-geynta emailkaaga.
Tusaalaha ugu wanaagsan waa Kooxda Dheriga degdega ah ee Facebook, oo uu bilaabay summaddu 2015 waxayna kortay in ka badan 3 milyan oo xubnood oo jecel wadaaga cuntooyinka iyo talooyinka alaabta.
9. Baraha bulshada ee dhiirigelinta leh
Tusaalayaal: Pinterest, YouTube, Instagram, blogs
Waxaa loo isticmaalaa: Raadinta macluumaadka iyo raadinta dhiirigelinta wax kasta laga bilaabo cunto karinta ilaa safarka ilaa qurxinta ilaa wax soo iibsashada iyo wax ka badan.
Sida ganacsigaagu u isticmaali karo: Habayn muuqaalada oo ku dhiiri geli dhagaystayaasha aad beegsanayso nuxur ku habboon dookhooda, oo ku dheji alaabtaada halka ay khusayso. Adeegso ururinta, liisaska-ciyaaraha, sumadaha, iyo hagayaasha si aad u ururiso macluumaadkaaga oo aad u abuurto mawduucyo ku habboon danaha dhagaystayaasha.
Goobaha warbaahinta bulshada ee dhiirigelinta ah sida Pinterest iyo YouTube ayaa si wanaagsan loogu habeeyay raadinta, taas oo macnaheedu yahay in qoraaladaadu ay ku jiraan ereyada muhiimka ah, hashtags, iyo sawirro la jaan qaadaya waxa dhagaystayaashaadu badanaa raadiyaan.
Blog-yaqaannada safarka ah waxay inta badan qabtaan shaqo aad u fiican oo ah inay wanaajiyaan qoraaladooda blog-ka iyo fiidiyowyada YouTube-ka raadinta sida "Waxa lagu sameeyo [Destination]" iyo "[Destination] Guide Travel."
Source: Baasaboor gaajaysan YouTube-ka
Haddi aad dhiseyso bulsho ama aad qiimaynayso goobo cusub oo uu ganacsigaagu ku biiri karo, waxa jira noocyo badan oo warbaahinta bulshada ah oo aad isticmaali karto. Qaarkood aad bay ugu qasban yihiin ganacsi kasta, halka kuwa kalena ay macno samaynayaan haddii ay la jaanqaadaan meelahaaga gaarka ah ama kiisaska la isticmaalo.
Wax kasta oo aad u baahan tahay iyo yoolalkaaga, waa khamaar badbaado leh inaad heli doonto hab aad u isticmaasho warbaahinta bulshada si aad uga faa'iidaysato ganacsigaaga.
Si fudud u maamul dhammaan boggaga warbaahinta bulshada addoo isticmaalaya Hootsuite. Hal dashboard, waxaad ka jadwalaysan kartaa oo daabici kartaa qoraallada, ka qaybgeli kartaa taageerayaashaada, la socon kartaa wada sheekaysiga khuseeya, cabbiri kartaa natiijooyinka, maamuli kartaa xayeysiisyadaada, iyo wax ka badan.
Sida Loo Aqbalo Lacago Badan WooCommerce
Sida loo beddelo heerka soo kicinta shaashadda ee Android